Ndezvipi zvigwaro zvinogona kushandiswa kuita Amazon keyword kutsvakurudza?
Keyword kutsvakurudza ibasa guru re Amazon search engine optimization campaign. Kubvira kwakakodzera kweAmerica inotsvaga kutsvaga mazwi mazwi kunogona kusimbisa mari yako uye kuvandudza zvigadzirwa zvako zvakakosha nzvimbo.
Zvichida wakaona zvakagadzirwa zvakanakisisa zvezvigadzirwa zvinosanganisira dzakawanda zvisinganzwisisiki zvinyorwa-zvakanyatsodzidziswa mashoko kuAmazon. Zvisinei, tinoda kubvuma kuti zvigadzirwa izvi zvine nzvimbo yakakwirira pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga Amazon peji. Iwe unogona kushamisika kuti nei vashandisi vakananga pane yakadaro spammy vanotarisa mazita uye vanotenga zvinhu izvi. Muzvokwadi, vashandisi havatauri semazita akadaro, asi Amazon maitiro anoita kuti zvive zvakakodzera uye zvinotsanangurwa. Ndicho chikonzero iwe unogona kutarisana nemazita akadaro panotangira tsvakurudzo yeA TOP of Amazon peji. Vatengesi vari paIndaneti vanoshandisa mazita aya marefu vanoziva kuti Amazon A9 algorithm inoshanda sei. Kunyora zvakanaka-yakagadziriswa mazita ekutsvaga vatengesi vemufambisi vanoita mazwi ekutsvaga kutsvaga kunyatsotsvaga mazwi avo vavanoda kutarisa. Neiyo mazita e-Amazon keyword research research tool, vanoona tsvakurudzo yevaya vanotarisira mazwi makuru uye vanobatanidza zvakasiyana-siyana muChinyorwa Chezvinyorwa, Tsanangudzo, Bullet Points, Mibvunzo Inowanzobvunzwa, Zvinyorwa, kunyange mifananidzo.
Munyaya ino, tichakurukura zvipi zvidzidzo zvaungashandisa kuti uwane mazwi ekutsvaga zvakakosha pane zvigadzirwa zvako, uye kuti zvingakubatsira sei kusimbisa nzvimbo dzako nekutengesa. Saka regai tinyatsotarisa matanho emhizha uye mazano anobatsira okuwana mazwi akakwana ebhizimusi rako rekutengesa.
inowanika kune vateereri vakawanda. Iyo isina rusununguko uye yakashandisa-yakanaka. Uyezve, inopa data yakarurama kwazvo. Ichi chigoni chinogona kukubatsira kuti uenzanise izwi rekutsvaga chero ipi zvayo mazwi nemitsara inokosha. Uyezve, inokupa mukana wekuwana mamwe mazwi akafanana. Maminitsi oseGoogle inounganidza tababytes yedhipatimendi, ndicho chikonzero Google Keyword Planner iyo iwe unogona kuwana tsanangudzo chaiyo yekuti vangani vanotsvaga mazwi echirevo kana mutsara inogamuchira. Iwe unogona kuderedza kutsvaga kwako nekwenyika uye vateereri zvikamu (zera, zvebonde, nezvimwe. ). Inonyanya kubatsira kana iwe uchida kusimudzira zvigadzirwa zvako paAmazon kana zvimwe zvekutengesa mapurisa.
Kutanga kushandisa Google Keyword Planner, unoda kugadzira AdWords huru. Kana uchinge uine aunti yako, uchawana Keyword Planner pasi pe Tools Tools. Pano unogona kutanga kutsvaga kwako nemamwe mazwi makuru uye zvishoma nezvishoma uende kune mamwe mazwi akareba mutsva ekutsvaga mazwi ayo vatsva vari kutsvaga. Kuti uite basa iri, unofanirwa kuzarura "Tsvaga mazwi matsva uye tsvaga ruzivo rwekutsvaga dhivhesi" chikamu uise chinyorwa chako chakakosha mu "Zvigadzirwa zvako kana zvebasa" tab. Pakupedzisira, chengetedza "Bvunza mazano". Somugumisiro, iwe uchawana runyoro rwemashoko makuru akafanana. Zvisinei, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekutsvaga neChwordword mazano, kwete neAdgroup ideas.
Google Keyword Planner ichakupa mavhareji emwedzi achitsvaga mamwe mazwi akafanana. Iko chaiyo yekutsvaga muAmazon inogona kusiyanisa neda data yaunowana muGKP. Zvisinei, idzi data ichave yakafanana, iyo inokubatsira kuti uone kuti ndeapi mazwi makuru achakutora iwe magwaro akawanda kuAmazon.
Tsanangudzo yakajeka yeimwe maAmerica keywords nyanzvi dzekutsvakurudza dzaunogona kuwana pane Semalt Mibvunzo neMhinduro peji Source .